Moon Tattoos Umqondo Kwabesifazane - Tattoos Art Ideas
i-sonitattoo Mashi 12, 2017
I-1. Inyanga tattoo nge cat ngemuva kwenza intombazane ikhangele futhi ihlehle
Amantombazane abathanda umdwebo wenyanga ngekati ngemuva kwawo. Lokhu kwenza kube lula nokukhangayo
I-2. I-tattoo yenyanga ene-blue and black ink design yenza ubukeka obuhle
Abesifazane abasha abanezinwele ezimnyama bayothanda umdwebo wenyanga nge-blue and black ink design ngemuva; lo mdwebo we-tattoo ufanisa umbala wabo wesikhumba ukuze ubonakale ubumnandi futhi bebukeka behle
I-3. I-tattoo yenyanga ne-inkiki ebomvu, rose flower design uletha ukubukeka okuhle
Abesifazane abaBrown bathanda umdwebo we-Moon nge-inkinobho, i-rose flower design ngemuva; lo mdwebo we-tattoo ufanisa izinwele zabo nombala wesikhumba ukuze babenze bayizibukobuhle futhi bahle
I-4. Lokhu kukhanya kwe-tattoo Moon inkinobho yokuklama ukwenza amantombazane abheke kakhulu
Amantombazane anesikhumba somzimba okhanyayo azohamba ngalolu hlobo olukhanyayo lwe-tattoo lwe-design inkino ngemuva ukuze abonakale bebukeka bebuhlungu kakhulu
I-5. Inyanga tattoo emqaleni iletha ukubukeka okuthakisayo
Amantombazane agqoke ama-blouses angenamikhono athande ukuthola i-tattoo Moon ngemuva. Lokhu kwenza ukuba babonakale bekhangayo nakakhulu
I-6. Inyanga umdwebo onqeni nge-design inkinobho emnyama ihambisana nombala wesikhumba ukwenza intombazane ibonakale inhle
Amantombazane enza i-tattoo yenyanga nge-inkinobho emnyama ekhaleni ukuze abonise umlenze wabo futhi enze iphuzu lokukhangwa
I-7. Inyanga tattoo esifubeni kwenza intombazane idonsa
Amantombazane aseBrazil azothanda umdwebo weNyanga esihlokweni esingenhla nge-flower pink design design; lo mdwebo we-tattoo ubenza bahle futhi bahle
I-8. Umdwebo wenyanga emathangeni ohlangothini unikeza amantombazane ukubukeka okukhangayo
Amantombazane, ikakhulukazi egqoke ama-skating amancane kanye nemikhankaso emifushane, azothatha umdwebo weNyanga emathangeni abo ukuze abenzeke kakhulu kubantu.
I-9. Inyanga tattoo ngemuva kwenza owesifazane avele emangalisa
I-tattoo yenyanga ne-black ink design emhlane yenza owesifazane avele emangalisa futhi enhle
I-10. I-tattoo yenyanga ene-enzyin design yenza owesifazane abukeke ehlobisa
Abesifazane abafuna ukubonakala bekhangayo bayodinga umdwebo wezinyanga nge-inkino design, inkinobho yokuklanywa.
I-11. I-tattoo yenyanga yabesifazane Abakhiqiza nge-enki enombala obomvu benza ukuba babonakale be-sexy
Abesifazane abakhanda abomvu bayodinga umdwebo weNyanga nge-enkino eluhlaza okwesibhakabhaka; lo mdwebo we-tattoo wenza ukuba babheke ubuhle futhi buhle
I-12. I-tattoo yenyanga ene-black ink design yenza intombazane ibheke i-classy
Amantombazane ahamba ngomdwebo omuhle wenyanga nge-design inkinobho emnyama ukuze abonise isimo sabo sobudala
I-Feather Tattoouthando izithombetattoos zomqheleTattoos zeJomethrikhitattoos cutedesign mehndilotus flower tattooukudubula izithombeama-tattoos engaloizithombe zezinhlangangesandla izidakamizwaama-tattoo amahangetattoos eagleimidwebo yamasleetattoo engaphelitattoos udadeumculo womdweboama-tattooimibono ye-tattooi-cherry ehlobisa i-tattooumdwebo wezindlovuama-tattoo kubantui-octopus tattooamathumbu esifubarose tattoosama-sun tattoosizithombe zezinyangabird tattooskoi fish tattooi-henna tattooi-scorpion tattooangel tattoosidayimani tattooi-compass tattooI-Heart Tattoosabangani bomngane abangcono kakhuluama-Tattoos amantombazaneTattoos yama-Ankleimisindo yezintamboflower tattoosizithombe zezingonyamaumdwebo we-watercolorizinyawo zamathamboimibhangqwana emibhangqwanaamathrekhi we-butterflyukubuyisa izithombeumdwebo womcibisholoizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyezitattoo isoama-cat tattoos